यी ४ लक्षणले देखाउँछ तपाईको बच्चाको पेटमा कीरा छ !!! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/यी ४ लक्षणले देखाउँछ तपाईको बच्चाको पेटमा कीरा छ !!!
काठमाडौँ । सामान्यतः बच्चाहरूको शरीर निकै कमजोर हुन्छ । उनीहरूको शरीर रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास भइसकेको हुँदैन । खासगरी बच्चाहरूको पेटमा कीरा हुँदा फरक फरक लक्षण देखिन्छ । बच्चाले धेरै पटक वा निरन्तर वान्ता गरेमा उसको पेटमा कीरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पेटमा धेरै प्रकारका कीरा हुन्छन्, जसले केही समयपछि फुल पार्छन् र संक्रमणलाई झन् धेरै बढाउने गर्छ । पेटमा भएका कीराले बच्चाको पाचन क्रियामा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
राउन्डवार्म इन्फेक्सन ::राउन्डआर्म सबैभन्दा बढी बच्चाको आन्द्रामा पाइने कीरा हो । यो ४ देखि १२ इन्चसम्म लामो र पातलो हुन्छ । यो सानो आन्द्रामा पनि हुने गर्छ । यो पहेंलो रङको कीरा हो । आन्द्रामा रहने यस्ता कीराले प्रजननका माध्यमबाट तीव्र रुपमा कीरा उत्पादन गर्छन् । संख्या धेरै भएपछि यी कीरा आमाशय, फोक्सोलगायतमा फैलिन पुग्छ ।
पिनवाम्र्स ::पिनवाम्र्स २.५ मिमि साइजको कीरा हो । यो कीरा कहिलेकाहीँ मूत्रनली र योनिको नजिकै पनि पुग्छ । मूत्रनली र योनिमा पुगेपछि यसले चिलाउने र जलन उत्पन्न गराउँछ । यो किसिमको कीरा बच्चाको पेटमा सबैभन्दा धेरै पाइने गर्छ । अधिकांश बच्चा विरामी हुनुको मुख्य कारण पिनवाम्र्स नामक कीरा नै हो । पिनवाम्र्सको अण्डा धुलो, माटो, पानी तथा तरकारीमा रहने हुनाले सजिलै मानिसको पेटमा पवेश गर्छ र विरामी बनाउँछ ।
पेटमा कीरा हुने लक्षण ::बच्चाको पेटमा कीरा हुनु पुरानो समस्या हो । संक्रमित खाना, पेय पदार्थ, घर नजिकै फोहोर र गन्ध, आधाकाँचो खाना पेटमा कीरा फल्ने कारण हो । पेटमा कीरा भएमा बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा प्रभाव पर्छ । पेटमा कीरा भएमा सबैलाई एकै प्रकारको लक्षण देखिन्न । फरक फरक हुन्छ । पेटमा हुने कीराको प्रकार र संख्याका कारण लक्षण पनि फरक फरक हुन्छ ।
दिसा धेरै गन्हानु::यदि बच्चाको दिसा धेरै गन्हायो भने त्यसलाई सामान्य रूपले सोच्नु वा लिनु हुन्न । निरन्तरजसो बच्चाको दिसा धेरै गन्हाइरहेको छ भने उसको पेटमा कुनै न कुनै खराबी रहेको बुझ्नुपर्छ ।
मलद्वार छेउछाउ चिलाउनु::बिहान हुँदा नहुँदै कीरा मलद्वारको छेउछाउ पुग्छ । जसका कारण बच्चाको मलद्वार आसपासमा चिलाउने र दुख्ने गर्छ । खासगरी स–साना बच्चा यस्तो समस्याबाट धेरै पीडित हुने गर्छन् ।
सुत्ने समय दुखाई हुनु::यदि तपाईको बच्चा पटक पटक पेट दुखेर हैरान भइरहेको छ, शान्तसँग बस्नसमेत सकेको छैन भने बुझिहाल्नुपर्छ कि बच्चाको पेटमा कीरा छ भन्ने कुरा ।
छालामा रेशा देखिनु::छालामा रेशा देखिनुको कारण कुनै किसिमको संक्रमण या गन्ध पनि हुन सक्छ । तर, कहिलेकाहीँ पेटमा कीरा भएका कारण पनि हात र खुट्टा राताराता हुन्छन् ।
पेट सफा हुँदैन ? यस्तो छ सजिलो उपचार !!पढ्नुहोस, शेयर गर्नुहोस !!
यो हो एक नम्बरी सुगरको औषधि !!! आँकको मात्र दुई पातले हटाउँछ जरैदेखि सुगर तर कसरी